5 Carruur ah oo shuban-biyood iyo Jadeeco ugu dhintay isbitaalka Garoowe. – Radio Daljir
Garoowe, June 14- Shan carruur oo aad u da?yar ayaa xanuunnada shuban-biyood iyo Jadeecada ugu geeriyooday isbitaalka guud ee magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland sida ay idaacadda Daljir u xaqiijiyeen Saraakiisha caafimaadka ee isbitaalkaasi ka hawl-gasha.
Carruurtaan geeriyootay ayaa maalmo dheer u dhul-jiiray xanuunnada dilay iyadoo aan la soo gaarsiin goobaha caafimaada, waxaana dhakhaatiirtu ay tilmaameen markii la keenay isbitaalka in ay adkaatay la tacaaliddoodu maadaama ay si daran u fuq-baxayeen maalmo badan.
Dr. Maxamed Xasan Carrabay oo ka mid ah dhaqaatiirta ka hawl-gasha isbitaalka guud ee magaalada Garoowe ayaa sheegay in aysan bulshadu khibrad u lahayn sida loola tacaalo cuduradaan, isla markaana aysan horay u keenin goobaha caafimaadka marka carruurtooda ay xannaannadaan ku arkaan taasoo sahasha dhimashada umadka.
Xannuunnada shuban-biyooda Jadeecada ayaa isbitaalka magaalada Garoowe waxaa u jiifa carruur badan oo ay soo riteen, waxaana socda dadaallo xooggan oo lagula tacaalayo ubadkaasi iyadoo sarakiisha caafimaadkuna ay tilmaamayaa kuwo badan in ay ka baxeen.
Arrintaan ku soo aadaysa xilli todobaadkii aynu soo dhaafay wasaaradda caafimaadku Puntland sheegtay in ay deegaannada Puntland ka dilaaceen cudurrada shuban-biyoodka iyo Jadeecada, waxaana wasaaraddu ay dadweynaha ka codsatay in ay xiriir joogto ah la wadaagaan goobaha caafimaadka.
Cabdiraxmaan Xuseen Gaardi